Gandaki Sanchar » फलेवासको माझीचौरमा खेलकुदका लागि रंगशाला निर्माण शुरू
फलेवासको माझीचौरमा खेलकुदका लागि रंगशाला निर्माण शुरू
पर्वत/ खेल क्षेत्रको विकासका लागि पर्वतको फलेवास नगरपालिकामा खेलकुद रंगशाला निर्माणकार्य शुरु भएको छ । फलेवास नगरपालिका वडा नं. ६ देविस्थान स्थित माझीचौरमा खेलकुद रंगशाला निर्माण शुरु भएको हो । बिहिबार फलेवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले रंगशालाको शिलन्यास गरेर कामको शुरुवात गर्नुभएको हो ।
फलेवास नगरपालिका वडा नं. ६ देविस्थानका वडाअध्यक्ष भोलनाथ भुसालले रंगशाला सम्पुणर् फलेवास बासीको गौरवको आयोजना भएकाले निमाणर् कार्यमा सबैले सक्रिय योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा फलेवास नगरपालिकाका प्रबक्ता टिकाराम गौडेल वडा तथा नगरपालिका सदस्यहरु सुरक्षाकर्मी पत्रकार र स्थानीयबासीको उपस्थिती रहेको थियो । फलेवास खेलकुद मञ्चका अध्यक्ष नारायण प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको संचालन लकास सुबेदीले गर्नुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति ५ असार २०७७, शुक्रबार १३:०५